सरिता गिरीको दोहाेराे नागरिकता भए तुरून्त खारेज गरेर निलम्बन गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग! – PathivaraOnline
Home > समाचार > सरिता गिरीको दोहाेराे नागरिकता भए तुरून्त खारेज गरेर निलम्बन गर्न सामाजिक सञ्जालमा माग!
admin June 9, 2020 June 9, 2020 समाचार, समाज 0
लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि नै होइन भन्ने जनता समाजवादी पार्टीकी नेतृ सरिता गिरीलाई नागरिकता खोसेर तत्काल देश निकाला गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता विभिन्न क्षेत्रका महत्वपूर्ण व्यक्तिले नै माग गरेका छन । पत्रकार ऋषि धमालासँग कुरा गर्दै लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्ने प्रमाण माग्दै भारतीय भएको दाबी गर्ने गिरीको नागरिकता खोसेर देश निकाला गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा माग देखिएको हो ।
राजनीतिक नेता, पत्रकार, व्यवसायी देखि चिकित्सकसम्मले गिरीको अभिव्यक्तिमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन । राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले उनीले संसदमा रहने नैतिकता गुमाएको बताएका छन । उनले भनाई फिर्ता लिने वा संसद पदबाट राजिनामा दिने दुइ मध्येको एक विकल्प रोज्नुपर्ने बताएका छन । थापाको प्रतिक्रिया तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै २०५५ सालमा कालापानी मार्चमा समेत सहभागी भएका नेकपाका युवा नेता अुनजकुमार श्रेष्ठले गिरीलाइ तत्काल देश निकाला गर्न माग गरेका छन । उनले लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भन्नेमा विश्वास गर्न नसक्ने गिरी राष्ट्रघाती भएकाले तुरून्तै देश निकाला गर्नुपर्ने माग गरेका छन । श्रेष्ठले लेखेको प्रतिक्रया तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै प्राध्यापक समेत रहेका चिकित्सक डा सुधांशु केसीले लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नक्सा होइन भनेर भारतीय पक्षको वकालत गर्ने गिरी कुन अाधारमा संसदमा रहिरहने भन्ने प्रश्न गरेका छन । केसीको प्रश्न तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।
त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी प्रदीप अाचार्यले पनि गिरीलाइ तत्काल देश निकाला गर्न माग गरेका छन । उनले गिरीले दिएको अभिव्यक्ति संविधान विपरित रहेको भन्दै भाजपाका नेताको भन्दा तल्लोस्तरमा देशकाविरूद्धमा टिप्पणी भएको बताएका छन । उनले गिरी माथि राज्यद्राेहकाे मुद्वा लगाएर भरत फर्काउनुपर्ने बताएका छन । उनको प्रतिक्रिया तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यस्तै पत्रकार हेमराज सिललालले पनि लिम्पियाधुरा नेपालको होइन भन्ने गिरीको नागरिकता खोसेर बिहार पठाउन माग गरेका छन । उनले लेखेको प्रतिक्रिया तल हेर्न सक्नुहुन्छ ।
पाल्पामा पहिरोले देवबहादुरको दुई तले पक्की घर…